Wasiirka Maaliyadda Mandheera oo u geeriyooday Covid-19. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wasiirka Maaliyadda Mandheera oo u geeriyooday Covid-19.
Wasiirka Maaliyadda Mandheera oo u geeriyooday Covid-19.
Isbitaal ku yaalla Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya waxaa ku geeriyooday Ibraahim Barrow Xasan oo ahaa Wasiirka Maaliyadda Ismaamulka Soomaalida Mandheera oo saacadihii lasoo dhaafay la xannuunsanaa fayruska ku dhacay.
Ibraahim Barrow Xassan waxa uu maamulka Mandheera u qaabilsanaa maaliyadda & qorsheynteeda, waxaana haleelay xannuunka Covid-19 oo kiisas kala duwan laga helay ismaamulka uu ka shaqeynayay.
Cali Rooba oo ah Guddoomiyaha Mandheera ayaa xaqiijiyay in Ibraahim uu sababsaday Fayruska Corona oo galaaftay nolosha dad ku dhaw 3-Milyan oo ruux guud ahaan Caalamka tan & markii uu soo ifbaxay.
“Jimcihii 2-da saq dhexe waxaa isbitaal ku yaalla Magaalada Nairobi xannuunka Covid-19 ugu geeriyooday walaalkeen Ibraahim Barrow Xasan, waxa uu ahaa Madaxa lacagta & dhaqaalaha, xilkaan waxa uu hayay siddeed sano & bar, waa shaqsi usoo shaqeeyay Dadka Mandheera” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiye Cali Rooba.
Waa uu sii hadlay Cali Rooba waxa uuna yiri “Waa xaqiiq in aan waynay qof daacadnimadiisa muddo intaas la eg ugu adeegay dadkiisa, waa geeri na taabatay waayo waxa uu ismaamulka u jiheeyay dhaqaale & maamul wanaagsan”.
Mas’uuliyiin katirsan Ismaamulka Mandheera ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in Ibraahim & shaqaale kale oo katirsan qaybta maaliyadda talaadadii laga helay astaamaha xannuunka Covid-19, kadibna loo diray Magaalada Nairobi si uu u helo daryeel caafimaad, ugu dambeyn ku geeriyooday.
Ismaamulka Mandheera ayaa ku doodaya in aysan helin daryeel Caafimaad, wacyigelin & goobo si gaar ah loogu daweeyo xaaladaha culus, balse qofka marka uu darsado loo qaado Magaalada Nairobi, sababtu waxa ay ku sheegeen in Dowladda Kenya ka gaabisay wax ka qabashada amni-darrada oo qof weliba uga cabsanayo in la beegsado.
Maqaal XigaTanzania oo Haweeney loo dhaariyay in ay ka noqoto Madaxweyne.